Madaxweyne Biixi oo shacabka uga warbixiyay Shirkii Jabuuti. - Awdinle Online
Madaxweyne Biixi oo shacabka uga warbixiyay Shirkii Jabuuti.
Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Somaliland, oo Khamiista maanta ah dib ugu laabtey Hargeysa, ayaa ka hadlay waxabihii looga hadlay shirkii Maamukiis iyo dowladda federaalka Soomaaliya ku dhexmaray Magaaladda Caasimada u ah Jabuuti.
Biixi oo xaqiijiyey in dhowr jeer uu shirka ku dhawaaqdey burbur ayaa carabka ku adkeeyay “dadka lala doodayey [guddiga farsamada dowladda federaalka Soomaaliya] ma aysan ahayn dad fahamsan waaqiciga jira” sida uu hadalka u dhagay.
“Nasiib darradu waxay ahayd dadkaan aan murmeynaa waxa jira ee waaqiciga ah, dad aad uga dhagarsan ma aysan ahayn ama dareemaya halka ay xuumadda mareyso iyo waxa jira,” ayuu hadalkiisa raaciyay isaga oo hadlayay bulshadii soo dhaweyntiisa ka qayb qaadatay.
Wuxuu hadalkiisa intaas ku daray: “Nasiib wanaag, dedaalkaas wuxuu socdaba, kolka waxa la kala boodaba, kolba aniga iyo Saleebaan [afhayeenka baarlamaanka Somaliland] aynu noqono odayaal oo aan niraahno bal u kaadiya deg-degi maynee, annagaa dan lahee u kaadiya bal hasoo boodinee, nasiib wanaag, xalay saacad dambe ayaa lasoo gunaanuday”.
Qodobaddii xalay leysku qabtay waxaa ugu muhiimsanaa arrimaha socdaalka gaar ahaan in ay isku gudbaan siyaasiyiinta xilalka haya ee ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
Guddigii farsamo ee kamid ahaa wafdiga Somaliland ayaa si cad uga soo horjeestay qodobkaas, iyagoo sheegay “in uu u ekeysiinayo maamul goboleed hoostaga dowlada federaalka” sida ay ku doodeen.
Guddiyadda ayaa waxaa qorshuhu yahay in ay isla Jabuuti ku kulmaan 15 maalmood kadib oo ah horaanta bisha soo aadan ee July, sanadkan 2020.
Muuse Biixi ayaa shacabka iyo siyaasiyiinta Somaliand u soo jeediyay in ay isku duubnaadaan” hadii maalin walba aad ku jirtaan xukumadu waa hal qabiil, kan aa kan ladhashay iyo dagaal qabiil gaaraysan dowladnimo” ayuu carabka ku adkeeyay Muuse Biixi Cabdi.
Maraykanka ayaa shirkaan lahaa abaabulkiisa iyo isku keenida labada dhinac ee Jubuuti ku shiray.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa ka dhawaayay in Dowladdaha Caalamka looga baahanyahay in Soomaaliya iyo Somaliland ku kala saaraan wadahadal ama Maxkamad, hadalkii la dhihi lahaa “Soo heshiiya adinkaa Soomaali ahe “ sidu hadalka u dhigay.
Inkastoo shirkaasi Xukumada Muqdisho u ahaa talaabo siyaasadeed oo ay horay u qaaday xilli lagu jiro olole doorasho, hadana Mustaqbal ayaa fahamsan in shirkaasi Muuse Biixi u noqotay fagaare uu ku garnaqsado oo beesha Caalamka uu gudbiyo tacadiyadii Goboladda Waqooyi u gaysteen ciidankii Millatariga.
Somaliland ayaa 1991-dii ku dhawaaqdey inay ka go’dey Soomaaliya inteeda kale, balse beesha caalamka waxay u aqoonsan tahay maamul goboleed si toos ah u hoostaga xukuumada Muqdisho.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre Oo La Kulmay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
Next articleMaxaa looga hadlay Shirka Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed:-(Sawiro)
Wariye Maxamed Cabdulwahaab Abuuja oo Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida maanta la horgeeyay
Wararkii u dambeeyay Shirweynaha Wadatashiga Beelaha Mudullood
Maxaa looga hadlay kulankii Xalay ee Xasan Kheyre iyo Xasan Sheekh
Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya oo ka degay Hargeysa iyo xog laga helay
Golaha Shacabka oo ansixiyay Sharci
Wasaaradda waxbarashada XFS oo soo xirtay imtixaanka shahaadiga ee dowladda+
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Ku Wajahan Dhuusamareeb